Magac loogu yeero: East-Norway
Tirada dadka (2015)
• Tiro Badnaan 27.41/km2 (71.0/sq mi)
Bari Norway (Bokmål: Østlandet, Nynorsk: Austlandet) waa juqraafi ah qaybta koonfur-bari ee Norway. Waxay ka kooban tahay degmooyinka Telemark, Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Oppland iyo Hedmark.
Bariga Norway waa kuwa ugu badan ee ku nool Norway. Waxay ka kooban tahay caasimadda dalka, Oslo, oo ah magaalada ugu weyn magaalada Norway.
Noorway, gobolka waxaa lagu magacaabaa Østlandet iyo Austlandet ("dhulka bari") oo ka duwan Vestlandet ("dhulka galbeed").
Ilaa 2015, gobolku wuxuu lahaa 2,593,085 qof, 50.4% dadka Norway ah.
Gobolka waxaa ku xayiray buuraha waqooyi iyo galbeedka, xuduudda Iswiidhiska ee bariga iyo Viken iyo Skagerrak koonfurta. Xuduudda dhinaca Sørlandet waa mid aan caddeyn.
Buuruhu wuxuu gaadhay heerkul dhan 2469 mitir oo ah xadka Jotunheimen, oo ah meesha ugu sarraysa ee dalalka Waqooyiga Yurub (marka laga reebo Greenland). Meelaha kale ee caanka ah ee buurta ah waxaa ka mid ah qayb ka mid ah Dovrefjell oo ku yaal waqooyiga fog ee gobolka, Rondane waqooyi bari ee Lillehammer iyo kuwo kale. Dhulka sare ee Hardangervidda wuxuu u fidaa Galbeedka Norway.
Gawaarida qulqulaya qulqulka buuraha, bari iyo galbeed, dooxooyinka ugu waaweyn waa Østerdal, Gudbrandsdal, Valdres, Hallingdal, Numedal iyo dooxooyinka badan ee Telemark. Østerdalen waxaa hareeraha ka jira meelo badan oo ku yaal xayawaan qallafsan, laakiin kuwa kale ayaa dhammaantood si weyn u gooyay buuraha.
Inta badan barafka bariga Norway badankoodu waxay ku badan yihiin buuraha dushooda leh geedo iyo geedo, iyo dhul beeraha oo dooxooyinka
Aagga hareeraha Oslo iyo dhinaca woqooyi bari ayaa ah kuwo isbarbardhigaya, waxaana jira waxyaabo badan oo ah goobo si weyn loo beeray, gaar ahaan Hedmarken, Toten, Hadeland, Ringerike iyo kuwo kale. Cufnaanta dadweynaha ee degaannada dhulku waa kuwa ugu sarreeya qaran, boqolkiiba 40% dadku waxay ku noolyihiin 200 km oo Oslo ah. Jasiirado farabadan ayaa hoy u ah xeebaha, iyagoo abuuraya janno loogu talagalay dadka dabbaasha iyo foosto xagaaga.
↑ Statistics Norway - Members of religious and life stance communities outside the Church of Norway, by religion/life stance. County. 2006-2010 Template:Webarchive
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Eastern_Norway&oldid=183210"
Last edited on 19 Oktoobar 2018, at 13:51